कहिले पक्राउ पर्छन् डन घैंटे र उनका सारथी आइजीपी सा'व ? | abc.com.np
कहिले पक्राउ पर्छन् डन घैंटे र उनका सारथी आइजीपी सा'व ?
Posted by abc staff.4years, 1 month ago. ( Comments )
काठमाडौं । राजधानीका प्रायजसो डनहरु गुण्डागर्दी छाडेर ब्यापार, ब्यबसाय हुँदै राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । गुण्डाका नाईके भनेर चिनिएका कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ भने आफ्ना सहयोगी परिचालन गरी असुली धन्दामा सक्रिय भएका छन् । यसको साथसाथै घैंटे आफ्ना दुश्मनको सफाया गर रणनीति अनुसार गुण्डागर्दीको क्षेत्रसमेत बिस्तार गर्न लागेको उनको पछिल्लो हर्कदबाट प्रष्ट भएको छ । आफूलाई गोली हान्न सक्ने क्षमता भएका डनद्धय रमेश बाहुनको जेल चलान र दिनेश अधिकारी उर्फ ‘चरी’ को प्रहरीको फेक इन्काउण्टरमा मृत्यु भएपछि उनी अहिले निर्धक्क भएर गुण्डागर्दीमा लागेका छन् । घैंटेले बाफल क्षेत्रका गुण्डाका नाईके समिरमानसिंह बस्नेत, सामाखुसिका सानो भाई र चाबहिलका प्रतिक श्रेष्ठ उर्फ हवल्दार, मनराज गुरुङ, प्रवेशमान श्रेष्ठ, गोकुल शिवाकोटीलाई प्रयोग गर्दै हप्ता असुली, ठेक्कापट्टा कब्जा र आफूबिरुद्ध जाइलाग्नेलाई खुकुरी हान्न प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
मिनकृष्ण मर्हजनमाथि बर्सिएको गोली काण्डसँगै रमेश बाहुन फरार भएदेखि नै ठेकेदार महासंघका महासचिव शरद गौंचनले समेत घैंटेलाई ठेक्कापट्टा कब्जा गर्न प्रयोग गर्दै आएका थिए । लागूऔषधसहित पक्राउ परेका रमेश बाहुन लामो समय जेलमा थन्किने भएसँगै महासचिव गौचनले घैंटेलाई च्यापेका हुन् । यसअघि गौचनले रमेश बाहुनलाई च्यापेका थिए । स्रोतका अनुसार राजधानीका अधिकांश गुण्डा पाल्ने र प्रयोग गने महासचिवका रुपमा गौंचन परिचित छन् । यसका अलवा घैंटेलाई सेनाका ठेकेदार काजी शेर्पाले समेत प्रयोग गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । बाफलका समिरमान बस्नेत र उनका दाहिने हात मानिने राधे भण्डारीको समुहले एक बर्ष अघि सतुंगलमा चरीमाथि भएको गोली प्रहार काण्डमा समेत घैंटेको ब्याकिङग् रहेको स्रोत बताउँछ । उक्त मुद्दामा पुनरावदेन अदालत पाटनले उनीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ । त्यस्तै, आधा दर्जन अपराध गरेको अभियोगमा प्रहरीमा उजुरी परेपनि पक्राउ नपरेका घैंटेका बिश्वासपात्र युबराज उर्फ सानुभाई गुरुङ अहिले सामाखुसि क्षेत्रमा घैंटेपछिका डनका रुपमा चिनिन थालेका छन् । उनी नुवाकोटका हुन् । सानु भाईलाई घैंटेले खुकुरी हान्न, मेनपावर कम्पनीबाट महिनावारी असुल्न, ठेकेदारहरुलाई बन्दुक देखाएर तर्साउने काममा प्रयोग गर्दै आएको पीडितले बताएका छन् ।
सानुभाईको समुह एक बर्षमा एक दर्जन बढी अपराधमा सलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घैंटेको आदेशमा सानुभाईले २०७० साउन १० गते सामाखुसि टाउन प्लानिङमा ज्यानमार्ने मनसायले मनोज मर्हजनमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए । लगत्तै ०७० कार्तिकमा धादिङका बिकाश लामालाई पनि खुकुरी प्रहार गरेका थिए । प्रहरीले सानुभाईको समुहलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नस्कदा उनको समुह थप अपराधमा सलग्न हुन थालेको पीडितको आरोप छ । सानुभाईको समुहले बिकाशलाई खुकुरी प्रहार गरेको केही समयपछि महादेबटारको हाईटमा च्याङबा भन्ने एक ब्यक्तिलाइ पनि खुकुरी प्रहार गरेका थिए । च्याङबालाई खुकुरी प्रहार गरेको केही दिनमै सानुभाईले बिकाश तामाङलाई बन्दुक देखाएर लखटेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । आधा दर्जन अपराधमा संलग्न रहेका सानुभाईलाई घैंटेको आडभरोसा रहेको छ । घैंटेकै संरक्षणमा सानुभाईले नुवाकोटबाट धादिङ ससुराली गएका पवन तामाङलाई खुकुरी प्रहार गरी ज्यानै लिएका थिए तामाङको हत्यामा मुख्य नाईके रहेका सानुभाई काठमाडौंमा खुलम्खुला हिँड्दा पनि प्रहरीको आँखामा पर्न सकेका छैनन् । सबै घटनाका बारेमा प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । यी सबै अपराधमा गुण्डाका नाईके घैंटेको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै घैंटेले धादिङमा हुने अधिकांश ठेक्कापट्टा कब्जा गर्न बाफलका समिरमान बस्नेत र राधे भण्डारीलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसअघि उनले मृतक ‘चरी’लाई प्रयोग गर्ने गरेका थिए । ठेक्कापट्टा र अबैध बालुवा खानी, ढुंगा खानीबाट असुलेको ८० लाख घैंटे एक्लैले खाएपछि चरी र घैंटेको सम्बन्धका ०६२ सालपछि चिसोपन आएको थियो । चरीलाई घैंटेले नै जन्माएको हुन् । चरीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि घैंटेले चरी बिरुद्ध बाफलका गुण्डा समिरमान बस्नेतलाई उभ्याएका थिए । धादिङमा चरीले एकाधिकार गर्न थालेपछि चरीसँग बिच्किएका राधे भण्डारीलाई धार बनाएर घैंटेले चरीबिरुद्ध गत बर्ष गोली हान्न लगाएका थिए । आफूमाथी गोली प्रहार गर्ने राधेलाई बदला लिने उदेश्यले ६ महिना अगाडि गोली चलाएका चरीलाई दुई साता अघि मात्र प्रहरीले मारेको छ ।
चरीको मृत्युसँगै घैंटेले चरीको क्षेत्रमा राज गर्न थालेका छन् । त्यस्तै घैंटेले कलेजबाट ‘डीआई’को नाममा पैसा असुल्न सन्तोष गुरुङ, मनिश ढंगोल, अनिल राणालाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सामाखुसि, बाफल, बालाजु क्षेत्रका प्राय कलेजहरुमा घैंटेले यी आराधिक समूह परिचान गरेर डीआईको नाममा विभिन्न कलेजहरुबाट रकम असुल्दै आएका छन् । यतिखेर समिरमान बस्नेत घैंटेको दाहिने हात भएका छन् भने देब्रे हातका रुपमा सानुभाई । समिरमानको समूहमा: राधे भण्डारी, कान्छा लामा, गोपी भण्डारी, शिब थापा, रानीवनको मनोज चित्रकार, सुरज प्रनब, जोन भन्ने ओम बहादुर गुरुङलगायत रहेका छन् । उनीहरुलाई केही काँग्रेसी नेताहरु र प्रहरी अधिकृतहरुकै संरक्षण रहेको ब्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् ।